Ole Gunnar Solskjaer oo qirtay in Jesse Lingard uusan “ku faraxsaneyn” waqti la’aanta ciyaarta | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Ole Gunnar Solskjaer oo qirtay in Jesse Lingard uusan “ku faraxsaneyn” waqti...
Ole Gunnar Solskjaer oo qirtay in Jesse Lingard uusan “ku faraxsaneyn” waqti la’aanta ciyaarta
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa qiray in weeraryahanka Jesse Lingard uusan ku faraxsaneyn heerka uu haatan ka joogo kooxda.
Lingard ayaa kursiga keydka ka soo kacay si uu u siiyo guusha waqtiga dhimashada Cristiano Ronaldo intii lagu guda jiray kulankii Champions League ee arbacadii ay la ciyaareen Villarreal – waana markii shanaad oo bedel lagu soo bilaabo xilli ciyaareedkan.
Solskjaer ayaa qirtay in xiddiga reer England uu doonayo inuu ku soo bilowdo kulamo badan Red Devils, ka dib markii kaliya loo isticmaalay bilowgii hal kulan ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan – guuldaradii EFL Cup ee ay kala kulmeen West Ham United .
“Jesse kuma faraxsana in uusan dheelin wax badan. ” ayuu Solskjaer u sheegay wariyeyaasha shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta ka dib.
Lingard ayaa qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay Hammers, ka dib markii uu dhaliyay sagaal gool 16 kulan oo uu ka soo muuqday Bariga London, tababaraha West Ham David Moyes ayaa aad u doonayay inuu weeraryahanka dib ugu soo celiyo kooxda ololihii 2021-22.
Si kastaba ha ahaatee, talaabadaasi ma noqon mid hirgasha waxaana 28 jirkaan looga tagay inuu u dagaalamo booskiisa Manchester, halkaasoo qandaraaskiisu dhacayo bisha June ee sannadka soo socda.
In kasta oo si weyn loogu xaddiday safafka beddelka illaa hadda ololahan, Lingard ayaa weli ku guuleystay inuu kaalintiisa qaato isagoo kasoo kacay kursiga keydka.
Previous articleAntonio Conte oo sheegay in Thomas Tuchel uusan Aqoon Sida loo isticmaalo Lukaku
Next articleAndrea Pirlo oo ku jira liiska seddexda Macalin ee bedeli doona Ronald Koeman
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dalbaday Manchester United inay ku ciyaaraan qaab deg deg ah si ay helaan fursado feecan. ...
War Rasmi AH: Tababarihii ugu fiicnaa Premier League bishii September oo...
Premier League oo ku dhawaaqay Liiska Xidigaha u Sharaxan Xidiga Bisha,...
Sheekh Maxamed SHAAKIR oo iclaamiyey dagaal cusub
Xiisad ka taagan gobolka Gedo kadib markii ay ciidanka Macallimuu xoog...